दिल्लीबाट लण्डन अब बसमा ! ७० दिनको यात्रा, १८ देश हुँदै पुगिने Bizshala -
काठमाण्डौ । बेलायतको लण्डनबाट भारतको दिल्लीसम्मकोे बस यात्रा ? तपाईलाई पत्याएर नलाग्न सक्छ अहिलेको यो हवाई मार्गको जमानामा बसमा यति लामो बस यात्राको कुरा गर्दा । तर अब चाँडै नै यी दुई देशबीच बस यातायात सेवा सुचारु हुन गइरहेको छ ।
यो अभुतपूर्व साहसिक बस यात्रा सन् २०२१ मा लञ्च हुनेछ । दुई देशबीचको यो बस रुटको दुरी २० हजार किलोमिटर हुनेछ र यो यात्रा गर्न ७० दिनको समय लाग्नेछ । यसका साथै यात्राको दौरान १८ वटा देशमा बस स्टप सेन्टर हुनेछन् ।
बसमा यात्रा गर्न चाहने यात्रुले पूर्ण यात्राका लागि वा त आंशिक यात्राका लागि टिकट काट्न सक्नेछन् । यो बस रुट भारत र बेलायतबीचको पहिलो हप अन/हप अफ बस सेवा हुनेछ ।
यो बस यात्रामा युरोपका हटस्पटको रुपमा मस्को, भिल्नीयस, प्राग्यु, ब्रसेल्स् र फ्रान्कट समावेश छन् । यसका साथै कजाकस्तानमा अवस्थित क्यासपियन सीमा बसले क्रूजको यात्रा गर्नेछ । यसपश्चात बस चीनको गोबि मरुभूमि हँुदै चीनको ग्रेटवालमा रोकिएर यात्रुहरुले हाइकिङ गर्नेछन् र चीनको चेङ्दुमा जाइन्ट पान्डाको अवलोकन गर्दै सिल्क रुटको यात्रा गर्नेछन् । बस दिल्लीको अन्तिम गन्तव्य पुग्नुपूर्व यात्रुहरुले म्यान्मारमा रहेको आर्कषक प्यागोडा पनि अवलोकन गर्ने मौका पाउनेछन् ।
अहिले कारोनाभाइरसले गर्दा अन्तर्राष्टिय यातायात ठप्प रहेकाले यो बस सेवा सन् २०२१ को जुलाई महिनामा लञ्च हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।
एडभेन्चर ओभरल्याण्ड फाउन्डरअन्र्तगत सञ्चालन हुने यो बस यात्राका फाउन्डर सञ्जय मदन र तुसार अग्रवाल रहेका छन् ।
यो हो विश्वकै महँगो फल, जुन हीराभन्दा पनि मूल्यवान
काठमाण्डौ । विश्वमा थुप्रै महँगा फल छन्। हामीले किलो १ हजारभन्दा...
आफ्नोजस्तै कोट अरुले लगाउन थालेपछि भड्के किम जोङ, लगाए
काठमाण्डौ । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनले आफूले लगाएको जस्तै...
विश्वमै लाखौँलाई रोजगारी दिने यी हुन् टप ५ कम्पनी
काठमाण्डौ । विश्वमा थुप्रै ठूला कम्पनीहरु छन्। कतिपय कम्पनीहरुको...
यी हुन् विश्वका टप युनिभर्सिटी, जहाँका पढेका धेरै विद्यार्थी
काठमाण्डौ । विश्वमा थुप्रै युनिभर्सिटी छन्। तीमध्ये पनि केही यस्ता...
भविष्यका लागि पैसा कसरी बचत गर्ने ? यी सूत्र अपनाउनुहोस्
काठमाण्डौ । धेरै मानिसको एउटा गुनासो हुन्छ–‘म पर्याप्त पैसा...
तुरुन्त छाड्नुस् पैसासँग जोडिएका यी खराब बानी, नत्र बढ्नसक्छ
काठमाण्डौ । आफूसँग टन्न पैसा, एउटा घर र अनि गाडी होस् भन्ने सबै...
बिना माग यो बैंकले ८४ हजार ग्राहकलाई दियो ऋण
काठमाण्डौ । कुनै पनि बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्नुअघि तोकिएका मापदण्ड...
विश्वका यी ५ धनाढ्यका ‘मनी मन्त्र’ फलो गर्नुहोस्, सफलता
काठमाण्डौ । यसपालिको तिहारमा लक्ष्मीपूजा भोलि कात्तिक १८ गते परेको...